‘उदयपुर ‘रेड जोन’ मा छ, व्यापक परीक्षण गर्दैछौं’ – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १० गते १९:३७
प्रदेश नम्बर १ को उदयपुर जिल्ला कोरोना संक्रमणको महामारीग्रस्त ठाउँ भएको छ। बुधबारसम्ममा ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रियुगा नगरपालिका–३ को मस्जिदआसपासको समुदायमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ।
मस्जिदमा रहेका १६ मध्ये सुरूमा परीक्षण गर्दा १२ जनामा कोरोना भेटिएको थियो। दोस्रो परीक्षणमा अन्य चार जनामा पनि देखियो। त्यसपछि समुदायमा थालिएको परीक्षणमा अन्य १५ जना संक्रमित फेला परेको प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए।
उदयपुर ‘हटस्पट’को पछिल्लो जानकारी, त्यहाँको अवस्था र नियन्त्रणमा थालिएका प्रयासहरूबारे मन्त्री कार्कीसँग हेल्थपोस्ट नेपालका खिलानाथ ढकालले कुराकानी गरेका छन्:
उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा–३ भुल्के कोरोना महामारीग्रस्त क्षेत्र भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के हो? संक्रमणको तह के छ?
भुल्केमा अहिलेसम्म ३६० वटा पिसिआर टेस्ट गरेका छौं। पहिलोपटक १६ जनामा परीक्षण गर्दा अधिकतम् परीक्षण आवश्यक देखिएपछि हामीले दायरा बढाएका थियौं।
संघीय सरकारबाट आएको र प्रदेशबाट खटिएको टोलीले ३६० परीक्षण गर्दा बुधबारसम्ममा ३० जनामा पुष्टि भएको छ। सुरूमा देखिएका १६ जनाबाहेक अन्य घरका एक जनाको दरले परीक्षण गरिएको थियो। अब ती घरका अन्य सदस्यहरूमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
त्यस्तै, आसपासका समुदायमा पनि परीक्षण आवश्यक देखियो। हामीले संघीय सरकारसँग कुरा गरेका छौं। मस्जिदमा बसेका १६ जना संक्रमितहरू भुल्केभन्दा पहिले चौदण्डी नगरपालिकाको अर्को एउटा मस्जिदमा बसेको हुनाले त्यो ठाउँलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ।
हो। अब उदयपुर ‘रेड’ जोनमा पर्‍यो। कोरोनाले उदयपुरसँग जोडिएका अन्य जिल्ला पनि जोखिममा परेका छन्। खासगरी ती व्यक्तिहरू सप्तरीमा बढीजसो आवतजावत गरिरहेको हुनाले त्यहाँ पनि परीक्षण बढाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश नम्बर २ सरकारलाई भनेका छौं।
त्यसो भए संक्रमणको दर उच्च रहेको बुझियो हैन?
हो। अब उदयपुर ‘रेड’ जोनमा पर्‍यो। कोरोनाले उदयपुरसँग जोडिएका अन्य जिल्ला पनि जोखिममा परेका छन्। खासगरी ती व्यक्तिहरू सप्तरीमा बढीजसो आवतजावत गरिरहेको हुनाले त्यहाँ पनि परीक्षण बढाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश नम्बर २ सरकारलाई भनेका छौं। संघीय सरकारमा उदयपुर र सप्तरीको परीक्षण र सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुझाव पेश गरेका छौं।
हामीले यो अवस्था देखिएपछि उदयपुरका समुदाय, सबै धार्मिक, सांस्कृतिक मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गिर्जाघरलगायतमा विशेष निगरानी राखेका छौं। जिल्ला सुरक्षा परिषदले निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा सेनाको सहयोग पनि लिइएको छ।
हामीले उदयपुर जिल्लाका शंकाग्रस्त ठाउँहरूमा ल्याब परीक्षण बढाउन प्रक्रिया सुरू गरेका छौं। अब व्यापक रूपमा परीक्षण गरिन्छ। संघीय सरकारको मेडिकल टिमले भोलिबाट ल्याब विस्तार गर्दैछ।
व्यापक परीक्षणपछिको रिजल्टका आधारमा उदयपुरमा कोरोना संक्रमणको स्थिति पत्ता लाग्छ। हामी जिल्ला सुरक्षा परिषदलाई प्रदेशबाट निर्देशन दिएका छौं कि राजनीतिक पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू, प्रदेशसभाका सदस्यहरू बसेर स्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै स्थानीय तहका जिम्मेवारहरूलाई बोलाएर त्यहाँका बेलका, त्रियुगा, कटहरी र चौदन्डी नगरपालिका ठाउँहरूलाई पूर्ण लक गर्नुहोस्। आवतजावत बन्द गर्न भनेका छौं। आजबाट यो सुरू भएको छ।
हामीले केही दिनअगाडि ट्राभल हिस्ट्री हेरेर केही ठाउँलाई संदिग्ध हुनसक्ने आशंका गरेका थियौं। आज आएर त्यो कुरा पुष्टि भएको छ। हामीले मन्दिर, मस्जिद, गुम्बालगायतका सघन बसोबास भएका ठाउँमा कडा निगरानी गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं। त्यसैगरी, परीक्षण पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले झापा, मोरङ, सुनसरीमा काम थालिएको छ। आरडिटी परीक्षण व्यापक भइरहेको छ।
हाम्रो प्रदेशमा अझै थप कोरोनाका संक्रमित देखिने चुनौती रहेकाले हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, निजामती क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र सबैलाई जिम्मेवार भएर गतिविधि गर्न भनेका छौं। यस कुरामा प्रदेश सरकार अत्यन्तै चनाखो छ। संघीय सरकार, स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले सबै गतिविधिबारे ब्रिफिङ गरेका छौं। चुनौती हाम्रो आँकलनभित्रै छ। नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छ।
विराटनगरको कोरोना अस्पतालमा अझै ४० जनाको क्षमता छ, भरपुर उपयोग गर्छौं। त्यसपछि अरू संक्रमितलाई धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउँछौं। त्यहाँ एक सय वटा बेड तयार पारेका छौं। ल्याबको क्षमता बढाउन भनेका छौं।
अहिले उदपुरमा स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य संस्थाको बढी आवश्यकता देखियो, कसरी जुटाउँदैछौं?
उदयपुरमा एउटा मात्र अस्पताल छ। त्यहाँको जिल्ला अस्पतालमा केही आइसोलेसन बेडहरू छन्। संक्रमित देखिनेवित्तिकै हामीले विराटनगर ल्याएर कोरोना अस्पतालमा राखेका छौं। जनता आतंकित हुने देखिएपछि विराटनगर नै ल्याइएको हो। अहिले थपिएका सबैलाई विराटनगर ल्याइँदैछ।
त्यसपछि आवश्यकता पर्‍यो भने हामी उदयपुरकै क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर संक्रमितलाई राख्नेछौं। बढी गम्भीर बिरामी भए भेन्टिलेटर भएठाउँमा लैजानुपर्छ भनेर हामीले सोचाइ बनाएका छौं। यसबारे सामाजिक मन्त्रालय, स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग परामर्श गरेका छौं। संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर भेन्टिलेटर विस्तार गर्ने तयारी छ।
अहिले के भन्न सक्छौं भने माघ महिनादेखि नै हाम्रो तयारी थियो। पूर्वअनुमान गरेर तयारी गरेको हुनाले अहिलेसम्म नियन्त्रणभित्रै राखेका छौं।
संदिग्ध क्षेत्रलाई अहिले कसरी नियन्त्रणमा राखिएको छ?
अहिले हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सहयोग लिएर त्यस क्षेत्रको आवतजावतलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। बाहिरका मान्छेलाई बाहिरै र भित्रकालाई निस्किन दिएका छैनौं। एरिया नै लक भएको छ।
संक्रमित घरका अन्य सदस्यको ल्याब परीक्षण गर्छौं। संक्रमित नभएका घरमा पनि नमूना परीक्षण गर्छौं। त्यसपछि संक्रमणको तह हामीलाई थाहा हुन्छ। अहिले चलनचल्तीको भाषामा भन्दा कोरोना भाइरस तेस्रो स्टेजमा छ। जुन महामारीको अवस्था हो। यी कुरालाई आँलन गरेर चौथो, पाँचौं तहका सम्भावनालाई पनि विश्लेषण गरेर तयारी सुरू गरेका छौं।
संक्रमित क्षेत्रमा घर–घरै पुगेर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि हैन?
हामीले ३६० नै घरमा प्रतिघर परीक्षण गरेका छौं। १६ जनाबाहेक अन्य ३६० घरमा परीक्षण गरिएकामध्ये पन्ध्र घरमा एक–एक जना देखिए। अब ती घरका अन्य सदस्यको गर्नैपर्छ। भोलिबाट त्यो काम गर्छौं। त्यसका लागि किट, रिएजेन्डहरू केन्द्रबाट मागिसकेका छौं। केन्द्रबाट किट र ल्याबको सामान भोलि नै आउँदैछ। केन्द्रको जनशक्ति पनि आउने छ। त्यसपछि हामी घरघरै पुगेर परीक्षण गर्छौं।